Ku raaxayso podcasts-yada aad jeceshahay ee leh Downcast | waxaan ka imid mac
Haddii aad si joogto ah noola socoto, hubaal waxaad garanaysaa podcast-ka aan toddobaad walba si toos ah ugu baahinno YouTube-ka oo hadhow laga heli karo iTunes, kanaalkayaga podcast-ka. Si loo ciyaaro podcast, waxaan isticmaali karnaa iTunes ama isticmaal codsiyada qolo saddexaad sida Downcast.
Downcast waa codsi qiimahiisu yahay 5,49 Yuuro Mac App Store Taasina waxay noo ogolaanaysaa inaan ku raaxaysano podcasts-ka aan jecelnahay xawaare kala duwan, oo ku habboon dhammaan isticmaalayaasha baahida leh, ama si fudud u jecel, si ay u isticmaalaan podcasts badan oo ay rabaan inay ku sameeyaan wakhtiga ugu gaaban ee suurtogalka ah.
Xawaaraha dib-u-ciyaarista podcast-ka waxay u dhaxaysaa 0,5 ilaa 3x, ilaa 1x, 1.25x, 1.5x, 2x, 2.25x, 2.5x, 2.75x. Downcast waxa ay noo ogolanaysaa in aanu baadhno buuga Apple, is-diiwaangeli oo soo dejiyo waxa ku jira, ha ahaato qaab maqal ama muuqaal ah. Waxa kale oo ay noo ogolaataa in aan ku biirno sanad walba anagoo ku darayna URL-keeda. Waad ku mahadsan tahay soo dejinta tooska ah, waan awoodnaa had iyo jeer gacanta ku hay podcast-kii ugu dambeeyay ee aad ugu jeceshahay.
Haddii aan horay u isticmaalnay codsi kale oo podcast ah, waan dhoofin karnaa quudinta si aan toos ugu soo dejino codsiga Downcast-ka. Quudinta ay ku jiraan waxyaabaha dadka waaweyni waxay noqon karaan kuwo sirta ah la ilaaliyo, waana ikhtiyaar ku habboon haddii aan gurigayaga ku leenahay carruur yaryar oo marin u leh Mac-gayada. waxay noo ogolaanaysaa inaan abuurno liisaska heesaha si aan u kala saarno mawduuca.
Haddii aan sidoo kale isticmaalno codsiga IOS, waxaan isku dhejin karnaa labadaba soo dejinta iyo booska podcasts ee aan dhageysaneyno, taas oo noo ogolaaneysa inaan bedelno qalabka si aan u sii wadno ciyaaraha meeshii aan ka tagnay. Thanks to iCloud syncing.
Hoos u dhigista waxay u baahan tahay macOS 10.11, 64-bit processor, wuxuu la jaan qaadayaa macOS High Sierra waxaana lagu heli karaa Ingiriisiga oo keliya, in kasta oo luqadda aysan dhib ku noqon doonin markaad ku raaxaysato codsigan si aad u dhageysato podcasts-yada aan jecelnahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Ku raaxayso podcadka aad ugu jeceshahay Downcast